Fiaraha-miasa 3P: trano fonenana ho an’ny mpikambana Cnaps | NewsMada
Fiaraha-miasa 3P: trano fonenana ho an’ny mpikambana Cnaps
Ao anatin’ny velirano faha-11 nataon’ny filoha Rajoelina Andry ny fampiroboroboana ny trano fonenana sy ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Napetraka ny Antokon-draharaha nasionaly hanohanana ny trano fonenana (Analogh), orinasam-panjakana eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MTTP), sady miara-miasa amin’ny minisitera lefitra miadidy ny Tanàn-dehibe vaovao sy ny trano fonenana (VMVNH). Ny antony, ny hanatanterahana ny Politikam-pirenena mikasika ny trano fonenana.
Tanjon’ny Analogh ny hiantoka ny ahazoan’ny tokantrano malagasy trano fonenana sahaza, hampihenana ny fahantrana sy hanatsarana ny fari-piainany. Maro, araka izany, ny tetikasa hanorenana trano fonenana manerana ny Nosy amin’izao fotoana izao.
Natao, omaly, ny sonian’ny fifanarahana eo amin’ny Analogh, ny banky BNI Madagasikara ary ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS). Hita taratra amin’ity fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina ity ny fanatanterahana ny Politikam-pirenena ho an’ny trano fonenana (3P).
Nilaza ny tale jeneralin’ny CNaPS, Rakotondraibe Mamy, fa anisan’ny tanjona ao anatin’ity fifanarahana ity ny ahazoan’ny mpikambana ao amin’ny CNaPS, mahazo trano fonenana. aorin’ny Analogh.
Amin’ny alalan’ny banky BNI no ahafahan’ny mpikambana mindram-bola, hividianana ny trano.